Akụkọ - Ntụle nke ihicha mabul na ịsa ihicha mabul
Ichicha mabul na polishing bụ usoro ikpeazụ maka usoro gara aga nke ọgwụgwọ kristal na-elekọta nkume ma ọ bụ nhazi efere ọkụ nkume. Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na nlekọta nkume taa, n'adịghị ka ụlọ ọrụ ihicha ụlọ ọrụ omenala na-asachapụ mabul ihicha na ịwasị. Ihe dị iche bụ:
Nke mbụ, ọdịiche dị mkpa.
Nkà na-edozi ahụ na-egweri n'elu marble bụ ihe mmalite maka nhazi elu nkume kristal ma ọ bụ usoro dị mkpa na nhazi nkume. Ụkpụrụ ya bụ isi bụ iji nrụgide na-egweri ngọngọ synthesized site inorganic acids, metal oxides na ndị ọzọ bekee na nrụgide nke n'ibu egweri diski, elu-ọsọ egweri ike, frictional okpomọkụ, ọrụ nke mmiri na dịtụ ire ụtọ marble elu nke anụ ahụ na. kemịkalụ imekọ ihe ọnụ, nke mere na marble elu-etolite ọhụrụ kristal oyi akwa. Igwe kristal a nwere ọkụ na-enwu enwu, na-enwupụta ìhè. Ọkụ nwere ike iru 90-100 degrees. Igwe kristal a bụ akwa nkume kristal gbanwetụrụ (1-2mm gbara ọkpụrụkpụ). Crystal n'elu ọgwụgwọ polishing bụ ndọtị anụ ahụ nke egweri ngọngọ polishing, ya bụ, egweri ngọngọ n'ime ntụ ntụ ma ọ bụ tinye a obere ego nke resin ntụ ntụ na mmiri ngwakọta na ala-ọsọ nkume na-elekọta igwe na eriri mpe mpe akwa mgbe egweri n'ala mgbe usoro. nke ìhè.
Nchacha marble bụ ihe mmalite maka ịchacha mabul na-egbu egbu, ihicha ihe na-ehicha mabul bụ ihe nhicha mabul na-ewu ewu na nchekwa nchekwa na 80s na mmalite 1990s, efula ahịa ugbu a na mkpa ịdị adị. Ihe kachasị mkpa ya bụ mkpuchi dị mkpa nke resin acrylic na PE emulsion polymers nke a na-ekpuchi n'elu nkume a kpọchiri ọhụrụ (efere a na-egbuke egbuke), nke bụ ihe anyị na-akpọkarị mmiri mmiri ma ọ bụ n'ala wax. Mgbe ahụ, mgbe elu-ọsọ, ala-nrụgide polishing igwe na fiber pad esemokwu n'elu nkume n'elu, nke mere na resin mkpuchi ọzọ na-egbuke egbuke a usoro. N'ihi mmelite ngwaahịa, na mgbe e mesịrị na-apụta nke ìhè pụrụ iche, wax-free, wdg, mkpuchi a yiri osisi n'ala mmanụ varnish.
The egweri na polishing usoro tupu marble na-elekọta crystal n'elu ọgwụgwọ bụ usoro nke anụ ahụ na kemịkal imekọ ihe ọnụ n'etiti nkume elu na kemịkalụ. A na-ejikọta oyi akwa kristal nke nkume nkume kpamkpam n'ime ihe dum na ala ala, ọ dịghịkwa akwa akwa akwa.
Ihe oyi akwa nke dị n'elu ebe a na-ehicha marble bụ ihe nkiri resin na-ejikọta na nkume nkume, nke na-enweghị mmeghachi omume kemịkal na nkume n'onwe ya ma kpuchie ya. Enwere ike ebipụ oyi akwa ihe nkiri wax a site na nkume nkume na otu shọvel.
Nke abụọ, ọdịdị nke ọdịiche.
Marble egweri polishing bụ prelude na-elekọta nkume, elu ìhè mgbe ọgwụgwọ polishing, elu idoanya, eyi iguzogide, stomp iguzogide, adịghị mfe ọkọ, bụ n'ezie embodiment nke nkume ojiji ọrụ na uru ndọtị.
Nkume waksị mgbe obere luxer, ìhè adịghị anya, na nke ukwuu edoghị anya, ọ bụghị iyi na-eguzogide ọgwụ, mmiri na-eguzogide, dị mfe ọkọ, oxidation na yellowing na-eme ka ihe kacha mkpa nke nkume oyiyi belata.
Nke atọ, ndọtị na ịrụ ọrụ dị iche.
Mgbe nlekọta na-aga n'ihu nke kristal oyi akwa na kristal oyi akwa mgbe polishing nke nkume na-egweri ngọngọ (nke a na-akpọkarị nlekọta kristal), a naghị emechi pores ya kpamkpam, nkume ahụ ka nwere ike iku ume n'ime na n'èzí, nkume ahụ adịghị. mfe ọnya. N'otu oge ahụ nwere ụfọdụ ihe mgbochi mmiri, mgbochi mmejọ.
Mgbe emechara marble ahụ, a na-emechi pores nkume kpamkpam, nkume ahụ enweghị ike iku ume n'ime na n'èzí, ya mere nkume ahụ na-enwekarị ọnya.
The na-aga n'ihu na-elekọta crystal oyi akwa na crystal oyi akwa mgbe polishing nke nkume egweri ngọngọ dị mfe na-arụ ọrụ, ọ dịghị achọ ihicha gị n'ụlọnga ọcha n'ala, nwere ike ịbụ kpọmkwem egweri ngọngọ na mmiri egweri na ọgwụ akọrọ egweri. Enwere ike eyi ma nye ya ara n'oge ọ bụla, enwere ike rụọ ya na mpaghara. Enweghị ọdịiche ọhụrụ na agba nke nkume nkume.
Site tụnyere n'elu, anyị nwere ike ịhụ marble polishing nwere ọtụtụ uru. Iji mee ka nkume polishing mmetụta dị mma, họrọ ezigbo ngwaọrụ diamond dị mkpa.Ụlọ ọrụ Fuzhou Bontai Diamond Tools Companynwere ihe karịrị afọ 30 n'ichepụta ahụmahụ, anyị nwere ike ịnye gị ụdị diamond dị iche iche maka ihe, terrazzo, konkiri, marble na nkume egweri & polishing ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-aza n'ime awa 24.